Waffenhandel Archive - Zon'olombelona & Light Art avy amin'ny Fondation PixelHELPER
fitaovam-piadiana ny varotra
22 Enga anie 2016
Fanentanana: Atsaharo ny fivarotana fitaovam-piadiana!
Atsaharo ny fampielezan-tserasera
Sary avy amin'ny gazetiboky ny gazety an-gazety
Horonantsary avy amin'ny radio sy ny fahitalavitra
Tohano ny fanentanana ataonay
Miomana ny fianakaviana Oetker
Raha ho any Syria ny tafika mandeha izy hiady tamin'i amin'ny ankehitriny sy izao tontolo izao dia natahotra an'i Noely tsena ny fanafihan'ny mpampihorohoro, ny manan-karena mampiasa vola any Alemaina ny fitaovam-piadiana orinasa. Vao haingana dia nisy tompon-tsehatra nataon'ny Dr. Ing. Ny August Oetker KG dia mandray anjara amin'ny fananana ny ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH, izay ahitana ny fiaramanidina mpiady alemà ao amin'ny raharaham-barotra. Ny orinasa fiarovana dia indraindray sarotra fampiasam-bola sarotra. Na dia mety ho azo antoka aza ny tsenan'ny varotra amin'ny fanondranana fitaovam-piadiana sy ny fiasan'ny Bundeswehr, fa ny fiheverana raharaham-barotra ihany koa dia misy karazan-dratsin'ny ra.
Ampiasao ny zavakanto maivana mba handratra ny lelan'ny medaly
PixelHELPER dia mametraka ny tanjona amin'ny vanim-potoana mivoatra Advantista mba hanondroana ny fampiasam-bolan'ny fianakaviana Oetker. Amin'izao fotoana izao rehefa mividy sakafo ho an'ny Cookies ho an'ny Krismasy, tsy misy ity hafatra kely am-pilaminana ity, dia nanomboka nanao fihetsiketsehana samihafa i Bienkowski. Ohatra, ny mpanakanto malaza dia nanolotra Dr. Ny logo Oetker amin'ny endambolam-piaramanidina sy ny sonia "Kanonenfutter" mankany amin'ny orinasan'ny Dr. med. Oetker any Bielefeld. Mety ho kely fotsiny ny fahitana ny lanitra tamin'ny alina tao Bielefeld, izay nanazava ireo làlana nafenina, fa eto kosa ny momba ny fifantohan'ny media. Ary toy izao marina izao i Bienkowski no nitsapatsapa tao amin'ny YouTube niaraka tamin'ny Jörg Sprave tao amin'ny YouTube malaza Slingshot Channel.
Ady ho raharaha manokana
Ary inona no fanehoan-kevitra nataon'ity trigger ity? Raha ny marina dia nisy fanambarana ofisialy momba ny orinasa Bielefeld hatramin'izao. "Ny famatsiam-bola dia raharaha manokana avy amin'ny fianakaviana roa ary tsy misy ifandraisany amin'ny orinasa. Oetker ", araka ny tatitra nataon'ny gazetin'ny New Westfälische Zeitung. Ary dia nentin'i Bienkowski nanaraka ny fitokonana manaraka ny Oetker fianakaviana mba hahatratra ny feon'ny fieritreretany. Ny fanontaniana raha toa ka tompon'ny orinasa Dr. med. Oetker dia tafiditra amin'ny orinasa mpitrandraka, tamin'ity indray mitoraka ity dia siramamy mamy sy tena tsy manan'aina avy ao amin'ny Berlin Boys Choir.
Afaka mihama-potaka kokoa noho ny pizza misy anao ve ny moraly?
Noho izany, avy any Rolf Zuckowskis Backhit "Ao amin'ny Noely fanaova-mofo" ny fiaraha-monina fanakianana ado "Ao amin'ny fanaova-mofo fitaovam-piadiana". Manontany ny fianakaviana Oetker ny ankizy: "Aiza no misy ny fitondran-tena?" Ilay hetsi-panoherana dia natolotra miaraka amin'ny mpanakanto hip hop Vokalmatador. Saingy tsy amin'ny resaka teknika sy votoatin'ny feo ihany, ny endriny dia afaka manolotra betsaka, marina ny fampielezana. Miaraka amin'ny masom-pasika eo anoloan'ny boaty hazo hazo 1,45 metatra. Ao anatin'izany toe-javatra tsy misy ifandraisany izany, farafaharatsiny, Richard Oetker dia tokony handao ny fifaliana amin'ny orinasa fitaovam-piadiana. Raha ny marina, ity farany 1976 dia nalaina an-keriny tao anaty boaty toy izany ary nalaina ho babo. Nanana kisary ny kisoa ny mpijirika. Moa tsy misy tsirony ve ilay asa? Azo antoka. Nefa firy maromaro mivadika mila ilainao ny manadino ny lasa anao ary mampiofana fitaovam-piadiana izay namono anao efa ho 40 taona lasa izay?
Fa fijanonana avy hatrany ny fanondranana ny fiara ho any Arabia Saodita teboka kasaina Mpanampy ao amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Action ny fitarainana - Atsaharo ny varotra fitaovam-piadiana, ny "Misaotra tsy misy fiara mifono vy any Arabia Saodita" teny eo amin'ny Federaly Chancellery sy ny Masoivohon'i Arabia Saodita.
Ny Saodiana dia mbola anisan'ny mpanjifan'ireo orinasa mpiaro ny orinasa goavana indrindra. Ao amin'ny tapany voalohany 2015 fanondranana fitaovam-piadiana no nahazo fankatoavana sarobidy efa ho 180 tapitrisa euros ho any Arabia Saodita - tamin'i Grande-Bretagne sy ny Isiraely dia vao mainka be dia be raharaham-barotra.
Alemana no tompon-daka Eoropeana amin'ny fanondranana fitaovam-piadiana Manerana izao tontolo izao, dia mitaky fahatelo any ambadiky ny Etazonia sy Rosia. Amin'ny fankatoavan'ny governemanta federaly, fitaovam-piadiana alemà ary fitaovam-piadiana alemana koa dia omena ny fitondrana jadona sy ny fitondrana miaramila tahaka an'i Arabia Saodita. Tsy afaka mandeha toy izao izany. Tiantsika ny hampitsahatra ny raharaham-barotra amin'ny fahafatesana.
Fanentanana: Atsaharo ny fivarotana fitaovam-piadiana! Jolay 1st, 2019Oliver Bienkowski